Qaylo-dhaan Ka Hadleysa Shirka Somaliya Ee London: “Ingiriisku Halka Uu Awr Marinaayo Irbad Buu Ka Dayaa” | Salaan Media
Waxaan marka hore ku bogaadinayaa Madaxweynaha Somaliland iyo wafdiga uu hogaaminayo ee ku sugan London sida ay uga gows qabsadeen soo jeedinta Ra’iisal wasaaraha Ingiriisku u soo jeediyey in somaliland ay ka qayb gasho shirka Somaliya loogu qabanyo dalka Ingiriiska.
Waxaa xusid mudan in dowlad iyo shiciba la isku raacay in la qaadaco oo aan laga qaybgalin shirka London sababtoo ah waxaynu u aqoonsanay in shirkaasi gaar u yahay somalia cida hagaysana uu ka mid yahay madaxweynaha Somaliya, Somalilandna aanay hoos iman Somaliya.
sidaa awgeed, haddii ay dowladda ingiriiska ay dhab ka tahay in ay ixtiraamayaan,Horumarka, Nabadgalyada iyo dowladnimada ka jirta somaliland, waxaanu dowladda ingiriiska u soo jeedineynaa khataraha uu ku keeni karo somaliland shirkaasi haddii ay ka qaybgasho.
1. In shirkaas ka gaybgalkiisu uu somaliland u horseedi karro burbur siyaasadeed oo ku yimaada dalka somalilnad.
2. In uu shirkaasi ku keeni karro somaliland dhexdeeda is aamin la’aan iyo kalsooni xumo soo kala dhex gasha shacabka somaliland iyo Madaxdooda, arrintaasi oo keeni karta khalkhal siyaasadeed iyo Nabadgalyo xumo.
3. In shirkaasi khatar ku yahay Himiladii ay u soo halgamaysay Labaatan Sanno iyo kabadan somaliland oo ahayd in somaliland ay ka madaxbaan tahay somalia, arrimahaasi iyo kuwa kale oo badan awgood.
Waxaan shacabka iyo Dowlada somaliland u soo jeedinayaa in aynu ku adkeysano mowqifkeenii shariifka ahaa ee aynu ku qaadacnay shirka London.
Haldoor Cali Maxamed Warancadde